In Uu Qorsheenayo Ku Biiridda Liverpool Xagaaga Dambe, Messi & Ronaldo Kan Laacibsan, Kante Oo Arrimahaas Uga Warramay Taageereyaal Ka Kexeeyey Masaajid Ku Yaal London Xilli U Waayey Baskii Uu Ku Safri Lahaa | Laacib.net
N’GOLO KANTE waxa uu qorshaha ku darsan doonaa in uu xagaaga dambe ku biiro Liverpool.
Waxaa aragtidan qaba taageere Liverpool ah oo habeen marti sooray Kante kaddib markii uu ka baaqday Tareenkii uu Paris u raaci lahaa kulankii Cardiff City kaddib.
Kaddib isaga oo raadinaya in uu Baska Euro Star ee geyn lahaa Paris ayey Masaajidka ku qabteen koox taageereyaal ah oo ku sii socda guryohooda.
27 jirka habeenkii oo dhan waxa uu ciyaarayey FFA, waxa uu cunayey digaag hala uu daawanayey goos gooska bandhigyadiisii kulanka Cardiff.
Mid ka mida taageereyaasha oo diiday in la magacaabo ayaa ka sheekeeyey laacibka khadka dhexe ee ay dadka oo dhami jecel yihiin, walina wata gaariga a Mini Cooper marka laga yimaado hodatinimadiisa isaga oo u warramaya Daily Mail.
“Waxaan kula kulannay Masaajidka 9pm, qof dabci wanaagsan ayuu ahaa kolkaa waxaan weydiinay in uu nala soo casheenayo,” ayuu yiri taageeraha.
“Waxa uu noo yimi 10kii waxa uuna nala joogay ilaa iyo dhammaadkii kulankii maalintaas.
“Waqtigaas oo dhan waxaan ka sheekeysaneyay kubadda cagta waxa uuna qiray in Messi qof walba oo kale ka heer sarreeyo.
“Ugu dambeyn waxa uu ka rejo dhogay aadidda France, waxa uu Taxi u raacay gurigiisa.”
19-09-2018 at 11:46 am
karti waa ciyaar yahan aad u qalbi Furan laguna Dayan Karo sida keli ah oo uu tageerayaashisa ula qaatay waqti ama waqti kamid ah qaybaha nolosheena ugu qaalisan lakinse halkuu messi amaan ta u saaray umaba qalmo messi